जलहरीमा ११ किलो सुन गडबडी, मुद्दाको तयारी - Sano Aawaj
जलहरीमा ११ किलो सुन गडबडी, मुद्दाको तयारी
२४ आश्विन २०७८, आईतवार by sanoaawaj
गत फागुन १२ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो, त्यही बिहान अदालत नखुल्दै राष्ट्रपतिबाट पशुपतिनाथमा जलहरी उद्घाटन गराइयो । रहस्य खुल्दै छ– सुनमा तामा र चाँदी मिसाउन मात्र होइन, मिलेमतोमा सुन पचाउन कोषले यति हतार गरेको थियो ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्नुअघि गत फागुन ११ मा तयार गरिएको मुचुल्का । सुनको मात्रा लेखिएको अंक(रातो घेरामा) नै केरमेट गरिएको छ ।
कोषले जलहरी बनाउन राष्ट्र बैंकबाट १ सय ३ किलो सुन खरिद गरेको थियो । त्यसमा भएको ८० करोड खर्चमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ५० करोड र अर्थ मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । १ सय ३ किलो सुन पगाली त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र एक प्रतिशत चाँदी मिसाएर १ सय ८ किलो २२ क्यारेट सुन तयार भएको कोषको दाबी छ । तर, कोषले जलहरीमा भने जम्मा ९६ किलो ८ सय २२ ग्रामको सुन प्रयोग गरेको मुचुल्का बनाएको छ । बाँकी ११ किलो सुन कहाँ गयो ? अख्तियारले कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी, कालिगड र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । कोषका पदाधिकारीले १ सय ८ किलो सुन नै जलहरीमा प्रयोग भएको दाबी गरेका छन् । तर मुचुल्कामा भने ९६ किलो ८ सय २२ ग्राम सुन मात्र प्रयोग भएको उल्लेख छ । सुनको मात्रा लेखिएको अंक र अक्षर दुवै केरमेटसमेत गरिएको छ ।
प्रारम्भिक छानबिनमा नै अनियमितता देखिएपछि यो विषयलाई अख्तियारले साउनमा विस्तृत अनुसन्धानमा लगेको हो । ‘अनियमितता देखियो, कोषका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित ३० जनाभन्दा बढीसँग बयान नै लिइसकेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब ४/५ जनासँग बयान लिन बाँकी छ, दसैंलगत्तै त्यसलाई टुंग्याएर अनियमितता गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’
Prevप्रिन्सिपल पाण्डे र १७ वर्षीया छात्राबिच ललाईफकाई यौन शोषण ! भेटियो यस्ता अश्लिल म्यासेज र तस्विरहरु
Nextप्रकाश सपूतसँग भिडियो खेल्न पाउँदा भाईरल कोमल मख्ख (भिडियो सहित)